43 लागि परिणाम simpsons
गाढा जंगल मा Simpson
Bart बाधाहरूलाई भन्दा रनले आफ्नो साहसिक समाप्त र यो खेल को सबै स्तर पारित मद्दत गर्नुहोस्।
को Simpson पाल्तु जनावर उद्धार
BART सिम्पसन को जंगल मा एक अचम्मको साहसिक छ, त्यो जंगल मा जनावर सुरक्षित गर्न चाहन्छ।
को Simpson जेल ब्रेक
जेलबाट सबै अवरोध पार र सार्न तीर कुञ्जी प्रयोग गरेर सडक मा पदक सङ्कलन गरेर सिम्पसन चलिरहेको भाग्ने मद्दत गर्नुहोस्।
Simpson Rambo बौना
यो खेलमा, सिम्पसन आफ्नो शहर मा सबै चोर आक्रमण गरेर आफ्नो मिशन पूरा गर्न छ।
त्यहाँ धेरै भूत खेदे छन् सिम्पसन, कृपया उहाँलाई तिनीहरूलाई हाम्रो सिम्पसन समातेर गरौं छैन, बाढी भूत उम्कन मदत।
Simpsons भूत पीछा
तिनीहरूलाई Simpsons समातेर गरौं छैन, Simpsons शहर उम्कन र अवरोध नगर्न, किनभने भूत उहाँलाई chasing छन् होसियार मद्दत गर्नुहोस्।
Simpsons परिवार दौड
यस Simpsons देखि सबै वर्ण बीचको मोटोक्रस दौड विवाद। होमर, Bart, मार्ज र लिसा मा तेजी र पहिलो रेखा पार गर्न सबै चुनौतीहरूको मार्फत जान तयार छन्।
को Simpson underworld
सिम्पसन सडक मा सबै खराब मान्छे मार्न र गिरोह र तिनीहरूलाई को मालिक नष्ट गर्न मद्दत गर्छ।
को होमर Simpsons को बास्केट कदम मा हुन् भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ, तपाईंले थुप्रै बास्केट बनाउन सहायता र तपाईं लचिलो हुन र बास्केट मारा राम्रो कुशल हुनुपर्छ।
गोमा Bart, आफ्नो Kart सवारी र जान तयार! सबभन्दा छोटो समय मा आठ मजा स्तर सम्भव पार र रूपमा फिर्ता धेरै प्रदर्शन र अगाडि गर्न सक्छन् तपाईं रूपमा फ्लिप। ग्राफिक्स, डिजाइन, र पृष्ठभूमि संगीत त ठूलो हो र खेल सबै के टी आवश्यक दिन
किक गधा होमर 2
, जहाँसम्म उहाँले सक्छन् रूपमा Bart ब्याटिङ होमर मदत अतिरिक्त दूरी प्राप्त गर्न अपग्रेड प्रयोग र Apu गरेको Kwik-ई मार्ट मा नयाँ उत्पादनहरु किन्न आफ्नो नगद प्रयोग गर्न बिर्सनु Dont
BART नयाँ वर्ष बाइक
तिमी माथि टिप बिना सन्तुलित रहन प्रयास रूपमा पटका बाइक संग पहाडमा सवारी।
को Simpson बाइक
सिम्पसन आफ्नो बाइक दुर्घटनाग्रस्त बिना पहाडहरू र सबै स्तर पूरा गर्न अवरोध आफ्ना बाइक मा सवारी मद्दत गर्नुहोस्।
किक गधा होमर
यस Simpsons Halloween जम्प
यो क्यान्डी लो र भूत देखि रूपमा लामो समय को लागि जीवित रहन possible.Defend रूपमा आफैलाई!
यस Simpsons शहर रक्षा
BART एक धेरै गाह्रो मिशन छ। उहाँलाई शहर सुरक्षा र सबै लाश मार्न मद्दत गर्नुहोस्। सडक मा अंक र बन्दुक सङ्कलन।
यस Simpsons शूटिंग
BART Simpsons सधैं एक बदमास बच्चा र सुपर सक्रिय तर अब त्यो अरू कुनै एक स्प्रिङफिल्ड शान्ति उहाँलाई उहाँको बहिनी उत्पीडन थिए लिसा बच्चाहरु प्राप्त गर्न मदत र आफ्नै हात वा Bette मा न्याय लिन हुनेछ गोली पानी बन्दूक जित्यो भनेर गरिएको छ
BART बाइक मजा
BART आफ्नो बाइक मा मजा भएको छ। उहाँलाई आफ्नो बाटो मा अवरोध सबै खाली मद्दत गर्नुहोस्। एक जोडी चुनौती लागि बीचमा अंक र बाइक सङ्कलन।
पागल चाल प्रदर्शन द्वारा Bart संग एक BMX मा प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं राम्रो प्रदर्शन अधिक फ्लिप र विशाल स्टन्ट तपाईं स्कोर र तपाईं पाउन हुनेछ थप अंक।
शत्रुलाई गोली र तपाईं कति मार्न सक्नुहुन्छ।
BART उहाँको पाङ्ग्रा एक बिट wobbly Hes बनाइएको रूपमा आफूलाई यति मा एक आँखा राख्न छन्, केही तबाही कारण तिमी उसलाई स्तर को सबै पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ भने हेर्न ... सिर्जना गरेको छ आफ्नै Kart छ र स्प्रिङफिल्ड को सडकमा बाहिर छ भनेर।
BART Simpson साहसिक
प्रत्येक स्तर मा सबै डोनट सङ्कलन गर्न सिम्पसन मद्दत गर्नुहोस्। तपाईंलाई रुचि मनपर्ने उपकरण चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि रक गर्न तयार, र अवरोध र राक्षस जोगिन गर्न निश्चित गर्नुहोस्। बाटोमा सबै डोनट सङ्कलन, तिनीहरूले पनि थप enegy दिनुहुनेछ।
BART के Hes सङ्कलन आफ्नो बाटो Hes मा नाश्ता संग हुन मानिस, बनेको स्प्रिङफिल्ड गल्लीहरूमा देखाउन आफ्नो स्केटबोर्ड मा बाहिर छ। मेरो शर्ट्स खान!
होमर रूपमा प्ले र पहाडहरू भन्दा एक एटीवी चार Wheeler ड्राइव। बाटो समयमा एक उच्च स्कोर लागि सबै Duff बियर सङ्कलन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
बाइक2मा BART
Bart पहिलो बाइक साहसिक पछि उहाँले दोस्रो साहसिक मा आफूलाई तयार छ। उहाँले आफ्नो पिछवाडे मा एक प्रशिक्षण भू-भाग builded। तपाईं आफ्नो अर्को साहसिक लागि तयार रही संग Bart मदत गर्न सक्छ
BART Simpson स्केटबोर्डिङ्ग
BART सिम्पसन सबै दिन स्केट गर्ने तरखरमा छ। के तपाईं कूद या तल Ducking तिनीहरूलाई जोगिन सक्छौं त नजिकै ध्यान हुनु आवश्यक छ त्यसैले आफ्नो बाटो मा अवरोध धेरै छन्।
होमर बियर सकिएको छ, तपाईं आफ्नो मोटरसाइकल मा बियर सङ्कलन उसलाई मदत गर्न आवश्यक छ। तर सवारी चलाउँदा पिउन छैन!
आफ्नो बियर सङ्कलन मद्दत होमर। तर मानिसहरू र फल्स भनी रोक्न चाहनुहुन्छ लागि बाहिर हेर्न!
यस Simpsons फ्लैश खेल को टाइल्स
तिनीहरूलाई गायब बनाउन टाइलहरू मा सिम्पसन प्रतीक को समूह क्लिक गर्नुहोस्। Duff टाइल्स तोड्न बियर कमाउन
यो समुद्री डाकू सिमुलेशन, तपाईंले आफ्नो जहाज, उन्नयन किन्न र सामान बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ र पनि छ कि माथि कहानी को मुख्य भाग बनाउँछ भव्य नौसेना लडाई बीच शङ्कास्पद वस्तु लुकाएर लैजानु।
टम र जेरी खतरनाक उडानहरू
टाउको चाल्नु 1 remasterized
हो, हामी फिर्ता पूर्वसूचना Sift पहिलो क्लासिक शूटर खेल ल्याए। सबै शूटर खेल परिभाषित गर्ने खेल फिर्ता छ र अझ राम्रो! सबै मिशन हामी प्रेम तर अब सुन्दर संगीत र थप तीव्र कार्य खेल खेल्न संग remasterized! स्मृति मा प्रवेश
Spongebob खाना परिवहन
Spongebob खाद्य परिवहन: Spongebob नयाँ जागिर पाएँ ... उहाँको कार्य गन्तव्यमा सुरक्षित सबै प्याकेजहरू ओसारपसार गर्न छ। कुनै न कुनै ट्रयाक मार्फत ध्यान ड्राइभ र सबै 12 स्तर खाली गर्नुहोस्। राम्रो नियन्त्रण र प्रदर्शन को लागि आफ्नो कार अपग्रेड गर्नुहोस्। छ
Spongebob महल चुनौती
तपाईं महल गेट गर्न आँधी रूपमा Spongebob महल चुनौती पनि महल गार्डस हार।
मारियो yoshi साहसिक
यो नि: शुल्क अनलाइन मारियो खेल एक लामो बाटो मा फल पाउन yoshi चलाउनु मारियो मदत